investment tips(investment tips) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
रु. १२ हजारको लगानी कसरी बन्नसक्छ साढे ४ करोड ? वारेन बफेटले बताए सामान्य नियम
काठमाण्डौ । अधिकांश मानिस सेयर बजारबाट कमाएको, करोडपति बनेको समाचार वा कथा सुन्छन्, पढ्छन्, तर आफैं जब बजारमा प्रवेश गर्छन्, पढेजस्तो वा सुनेजस्तो सफल भने बन्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता लगानीकर्ताले बजारबाट कमाउनु त परैको कुरा, भएको रकम समेत गुमाउँछन् । सीमित व्यक्ति(लगानीकर्ता) मात्र यस्ता हुन्छन्, जसले सेयर बजारमा गरेको थोरै...
प्राथमिक र दोश्रो बजारमा लगानी गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिने ?
काठमाण्डौ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण सूचक मानिने पूँजीबजारमा सर्वसाधारणले लगानी गर्दा विभिन्न विषयमा ख्याल गर्नुपर्दछ । अत्यन्त जोखिम मानिने सेयर बजारमा विविध सूचना तथा जानकारीहरुको संग्रह र विश्लेषणले लगानीको सही निर्णय लिन सघाउ पुर्याउँदछ । विवेकपूर्ण लगानीका कारणले सेयरबाटै करोडपति भएका उदाहरणहरु पनि प्रशस्त छन् । यो आलेख नयाँ...
जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा गर्दा कसरी सही कम्पनी छनौट गर्ने ?
काठमाण्डौ । यदि तपाई बिमा गराइरहनुभएको छ भने प्रिमियम र सम्बन्धित कम्पनीको सेटलमेन्ट अनुपात बाहेकका केही महत्वपूर्ण विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र सही बिमा कम्पनीको छनौट संभव हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरु कम प्रिमियम बुझाउनुपर्ने कम्पनीमा ध्यान दिने गर्छन्, तर राम्रो बिमा कम्पनीको छनौटको यो सही...
विश्व हल्लाउने बफेटको चिठी, यी ६ मन्त्र सिके सेयरबाट मालामाल !
काठमाण्डौ । विश्वका सबैभन्दा ठूला सेयर लगानीकर्ता(बादशाह) वारेन बफेटले आफ्नो कम्पनी वर्कसायर हाथ्वेका सेयरधनीहरुलाई वर्षमा एकपटक पठाउने चिठी विश्वभरको बित्तीय क्षेत्रले व्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेको हुन्छ । बफेटले मुख्य रुपमा यो चिठीमा लगानीका लागि आफ्नो सोंचको जानकारी दिन्छन्, यहीकारण यो चिठीबाट विश्वभरका लगानीकर्ताहरुले धेरै कुरा...
वारेन बफेटको ९ ताजा लगानी टिप्स, पछ्याए कुस्त कमाउन सकिन्छ !
काठमाण्डौ । विश्वकै तेश्रो धनी व्यक्ति वारेन बफेटको भनाईमा आम्दानी बढाउनका लागि सही दिशाको आवश्यकता पर्छ । प्राय मानिसहरु धनीहरुलाई हेरेर त्यस्तै बन्ने कोशिश त गर्छन, तर स्पष्ट दिशाबिनाको त्यस्तो कोशिशको अर्थ हुँदैन । अबदेखि धनी भइसकेकाहरुलाई मात्र हेरेर लगानी गर्न बन्द गर्नुहोस्, बरु सही दिशा र ठाउँमा आफ्नो पैसा लगानी गर्नुहोस् ।...
पैसाको पुरानो नियमबाट अब चल्दैन जीवन, विज्ञबाट आए यस्ता सुझाव
काठमाण्डौ । ‘लगानीका लागि ऋण कहिल्यै नलिनुहोस् । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृति राम्रो होइन ।’ प्रायः भनिन्छ कि यदि तपाईले यस्ता सरल नियमहरुको पालना गर्नुभयो भने रुपैयाँ–पैसाको विषयमा तपाईले कहिल्यै पनि कुनै मुश्किलमा फस्नुपर्ने छैन । फाइनान्सियल प्लानिङ(वित्तीय योजना)को मामलामा समेत यी नियम रणनीति बनाउन उपयोगी मानिन्छन्...
अमेरिकी भिजा त्यागेका एक किशोर, सेयरबाट करोडपति बन्ने सपना हुर्काउँदै !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । सेयर बजारले धेरैको जीवन बनाएको छ । यो क्षेत्रमा लागेर अरुको पछाडि कुद्नेहरुले सर्वश्व गुमाएका पनि छन् । केही महिनाअघि नेप्से इण्डेक्स १८८१ को सर्वाधिक विन्दूमा पुगेपछि सेयर बजारबाट रातारात करोडपति बन्ने सपना पाल्नेहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । यस्तै सपना साकार पार्ने अभिलाषासहित विभिन्न वर्ग, तप्का,...
सेयरमा लगानी गर्दा वारेन बफेटले समेत पछ्याउँछन् यी ८ सूत्र
काठमाण्डौ । तपाई पनि पैसा कमाउने विषयमा सोचिरहनु भएको छ भने यसका लागि ठूलो रकम नै चाहिन्छ भन्ने अनिवार्य हुँदैन । सानो रकमलाई सही ढंगले लगानी गरेर पनि धनी बन्न सकिन्छ । कमाईका लागि हामीसँग उपलब्ध धेरै विकल्पमध्ये एउटा हो–सेयर बजार । बजारका केही आधारभूत नियममा ध्यान दिएर लगानी गर्ने हो भने धनी बन्ने सपना धेरै टाढा नहुनसक्छ । हामी...
सफलताका लागि बिल गेट्सका ६ सामान्य नियम, जुन प्रोफेसनल कलेजमा समेत सिकाइन्न !
काठमाण्डौ । अक्टोबर २८ अर्थात बिल गेट्सको जन्मदिन । उनको जन्मदिनको अवसरमा केही अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुमा बिल गेट्सको लगानी सूत्रको बिषयमा चर्चा गरियो । ती यस्ता नियम हुन्, जुन कुनै पनि स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा समेत बताइन्न वा सिकाइन्न । बिल गेट्सका यस्तै केही नियमहरुको बिषयमा हामी बताउन गइरहेका छौ, जसले तपाईलाई जीवनमा...
यस्ता कम्पनीमा लगानी गरे औसत २५% रिटर्न पाउन सकिन्छ !
-सन्दीप पौडेल सेयरबजारमा गरिने लगानीमा प्रतिफल सामान्यतया बैंकमा राखिने सामान्य निक्षेप र मुद्धतीमा भन्दा धेरै बढी हुने गर्दछ । तर सेयरमा जोखिम पनि अधिक हुने गर्छ र प्रतिफलको पनि कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तर, जानेबुझेर लगानी गर्ने हो भने सेयरबाट फाइदा भने अवश्य हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनी छनौट गर्दा धेरै पक्षहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक...
बैंक तथा बित्तीय कम्पनीमा लगानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरु
►सन्दिप पौडेल बित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरु नाफामूलक हुन्छन्, तर सबै कम्पनीमा राम्रो कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने चाहि हुँदैन । त्यही भएर लगानीकर्ताहरुले बित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरुले सधैं नाफा मात्रै दिन्छन् र सबै बैंक तथा बित्तीय संस्थाले गतिलो रिटर्न दिन्छन भन्ने कुरा चाहि गलत हो । नेपालको सन्दर्भमा बित्तीय कम्पनीहरुको...
सेयरमा लगानी गर्दा कसरी गर्ने जोखिम व्यवस्थापन ? यी हुन् केही आधार
-सन्दिप पौडेल विश्वमा जति पनि लगानीयोग्य वित्तीय उपकरणहरू उपलब्ध छन्, तीमध्ये उच्च प्रतिफल पाउने लगानीको क्षेत्र भनेको सेयरबजार हो । जति सेयरबाट नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, त्यति नै सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम बहन गर्न सक्नुपर्छ । सेयर र समग्रपोर्टफोलियोको उचित ढंगले सुरक्षा गर्न जान्नुपर्छ । लगानीका क्षेत्र, कम्पनी, ब्यवसाय आदिमा लगानी...
एकमिनेटमै पत्ता लगाउनुहोस् तपाईको लगानी कहाँ चारगुणा हुन्छ ? सूत्रसहित
काठमाण्डौ । प्रत्येक मानिसले चाहन्छ कि त्यस्तो ठाउँमा लगानी होस्, जहाँ उसलाई चाँडो भन्दा चाँडो बढीभन्दा बढी रिटर्न प्राप्त होस् । आजको समयमा बैंकको मुद्धती निक्षेप, सेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, सरकारी ऋणपत्रहरु लगानीका लागि लोकप्रिय स्कीम हुन् । तपाई अलग-अलग स्कीममा प्राप्त हुने रिटर्नलाई त पत्ता लगाउन सक्नुहोला, तर कुन स्किममा तपाईको पैसा...
सेयर बजारबाट कमाउने यी हुन् ८ मन्त्र !
काठमाण्डौ । यदि तपाई पैसा कमाउने बिषयमा सोचिरहनु भएको छ भने त्यसका लागि ठूलै रकमबाट लगानी थाल्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी हुँदैन । तपाई थोरै लगानीबाट नै सुरुवात गरेर समेत धनी बन्न सक्नुहुन्छ । तर, तपाईले सेयर बजारको केही आधारभूत नियमको बिषयमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । हामीले आज तपाईलाई बताउन लागेको नियम त्यस्ता नियम हुन्, जसलाई...
पैसा डबल गर्ने हो ? 'फर्मूला सेभेन्टी टू' सिक्नुहोस्
काठमाण्डौ । आफूले बचत गरेको रकमले सकेसम्म चाँडो राम्रो रिटर्न दियोस् भन्ने चाहना जोकोहीलाई हुन्छ । आजको समयमा नेपालको बित्त बजारमा बैंकको मुद्धती बचतदेखि म्युचुअल फण्ड, सरकारी ऋणपत्रहरुमा समेत लगानीका बग्रेल्ती अवसरहरु खुलेका छन्। तपाईले यो क्रममा यी अलग अलग स्कीममा लगानी गर्दा पाइने रिटर्नको बिषयमा त पत्ता लगाउनु नै होला, तर...
भुक्तानी कारोबारमा नयाँ व्यवस्था, मर्चेन्ट पेमेन्टको सीमामा १० गुणाले वृद्धि(सर्कुलरसहित)
‘नेपालका लागि ६ वटा बैंक पर्याप्त !’
एक महिलाले कुमारी बैंक हल्लाइन्, साधारणसभाको १५ दिनमै विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्ने आपत !